ညိုထက်ညိ – ‘ရွှေပြည်စိုး’ ရှာပုံတော် | MoeMaKa Burmese News & Media
ညိုထက်ညိ – ‘ရွှေပြည်စိုး’ ရှာပုံတော်
News Watch Weekly စောင့်ကြည့် သတင်းဂျာနယ် အတွဲ ၁၁ အမှတ် ၂၂ ၊ ၂၀.၉.၂၀၁၆
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၆
‘မြ နဲ့ မောင် နဲ့ ခုမှတွေ့တာ’ ဟူသော စကားလုံးတွေကို တွေ့လိုက်လျှင်ပင် စာဖတ်သူတို့ လေဘာတီမမြရင် သီဆိုခဲ့သော တေးရေး နန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင်၏ နာမည်ကျော် လက်ရာမွန် ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်း ကို ကြားယောင်မိကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
‘မြ နဲ့ မောင် နဲ့ ခုမှတွေ့တာ’ တဲ့…
ထိုသီချင်းကို နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်နီးပါး ကျွန်တော် လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရပါသည်။
‘ရွှေပြည်စိုး’ ကို ကျွန်တော် စတင်နားထောင်ဖူးတာ ကျွန်တော် ဆယ်နှစ်သားလောက်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်မှာ ၁၉၈၆ ခုနှစ်ခန့်ဖြစ်၍ ထိုစဉ်က မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ခေတ်ဟောင်းသီချင်းများ ရံဖန်ရံခါလာလေ့ရှိရာ သီဆိုသူများကို ယခုမမှတ်မိတော့သော်လည်း ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းကို ထိုအချိန်မှ စတင်နားဆင်ဖူးခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ထိုအချိန်က စတုတ္ထတန်းတွင် နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်အကြောင်း မြန်မာစာတွင်သင်ရလေရာ ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းရေးသူအဖြစ်ပါ ကျွန်တော်ပူးတွဲ၍ မှတ်သားမိခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က ‘ရွှေဘိုသနပ်ခါး’ သီချင်းကိုလည်း ရုပ်မြင်သံကြားတွင်ကြည့်ရ၍ ထိုသီချင်းမှာလည်း နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်ပင် ရေးခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်အား ထိုသီချင်းနှစ်ပုဒ်နှင့်ပင် ကျွန်တော် မှတ်မှတ်ထင်ထင် ရှိခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် ကျွန်တော့်ဖခင်ဖြစ်သူမှာလည်း ရှေးခေတ်ဟောင်းသီချင်းများကို ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်သည့်အပြင် သီချင်း ဆိုတာလည်း ဝါသနာပါသူဖြစ်သောကြောင့် ဖခင်ထံမှ ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းကိုလည်းကောင်း၊ နောက်ထပ် ကျွန်တော်အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းတပုဒ် ဖြစ်သည့် နန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင် ပင်ရေးသော ‘လက်ရည်တပြင်တည်း’ သီချင်းကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်တော့်အားသီဆိုပြတာ နားထောင်ခဲ့ရ ပါသည်။ ထိုအချိန် မှစ၍ ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းမှာ ဖခင်ဆိုပြသော အခြားသီချင်းများဖြစ်သည့် ‘ချစ်မိုးကြီး’ အစရှိသည့် သီချင်းများ နှင့်အတူ ကျွန်တော့်အသည်းစွဲ သီချင်းတပုဒ် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
သို့သော် ထိုသို့ ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းကို ကျွန်တော် ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သော်လည်း သီချင်းစာသား အတိအကျ ကိုမူ တခါမျှမဖတ်ဖူးခဲ့ပါ။ ဖတ်ရန်လည်း တခါမှအခွင့်အရေးမကြုံခဲ့ပါ။ ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းမှာ ခေတ်ဟောင်း သီချင်းဖြစ်၍ ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာသော အသက်နှစ်ဆယ်ခန့်အရွယ်တွင် သီချင်းစာသားကို ဖတ်ရှုခွင့် ရရန်အပထား၊ သီချင်းကိုပြန်လည်နားထောင်ရန်ပင် မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
သို့သော် ကံအားလျော်စွာ ၉၀ အလယ်ပိုင်းနှင့် နှောင်းပိုင်းခုနှစ်များတွင် မြန်မာသံ ပြန်ဆိုတေးများ ပြန်လည် ခေတ်စားလာပါသည်။ နီနီဝင်းရွှေ၊ ပိုးအိစံ၊ စိုးစန္ဒာထွန်း အစရှိသော မြန်မာသံသက်သက် သီဆိုကြသည့် အဆိုတော်များ ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ ယခင်က လူကြိုက်များထင်ရှားခဲ့သော မြန်မာသံ ဂန္ထဝင်သီချင်းများ ကိုလည်း အသစ်ပြန်လည်သီဆိုကြတာ ပြန်ကြားလာရပါသည်။ ထိုအထဲတွင် ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းလည်း ပါပါ သည်။ ထိုအချိန်တွင် ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းကို ကျွန်တော် ပြန်လည်နားဆင်ခွင့် ရသော်လည်း သီချင်းစာသား များကိုမူ ဖတ်ရှုခွင့်မကြုံခဲ့ဘဲ ကျွန်တော် နားဆင်ရသမျှသာ သိခဲ့ရပါသည်။
ထိုသို့သောအနေအထားဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း လူငယ်ဘဝမှ လူလတ်ပိုင်း သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ထိုအချိန် လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ခန့်ကမှ တနေ့တွင် အမှတ်မထင် Youtube တွင် ‘ရွှေပြည်စိုး’ ဟူသောအမည်နှင့်ရှာကြည့်မိရာမှ ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ဘဝကတည်းက စွဲလမ်းနှစ်ခြိုက်ခဲ့ရသော ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းဗီစီဒီနှစ်ပုဒ်အား တွေ့ရပါတော့သည်။
ကျွန်တော်တွေ့သော ‘ရွှေပြည်စိုး’ ဗီစီဒီနှစ်ပုဒ်အနက် တပုဒ်မှာ ပိုးအိစံသီဆိုပြီး သရုပ်ဆောင် ပပဝင်းခင်က အက ဖြင့် သရုပ်ဆောင်ထားသောအပုဒ်ဖြစ်၍ နောက်တပုဒ်မှာ မာမာအေးသီဆိုထားသောအပုဒ် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုးအိစံသီဆိုသောအပုဒ်တွင် စာသားပါ၍ မာမာအေးသီဆိုသောအပုဒ်တွင်မူ စာသားဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ ထိုအခါတွင်မှ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော် စာသားနှင့်တကွ တစ်သက်လုံး နားထောင်ချင်ခဲ့သော ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းကို ဝမ်းသာအားရကြည့်ရှုနားဆင် မိပါတော့သည်။
ပိုးအိစံသီချင်းတွင် စာသားပါ၍ ပိုးအိစံသီချင်းကို ဦးစွာနားဆင်မိပါသည်။ သီချင်းစာသားများမှာ ကျွန်တော် နဂိုကတည်းကကြားဖူးခဲ့ပြီဖြစ်သောစာသားများဖြစ်ပြီး မြောက်မြားလှစွာသော မြန်မာဗီစီဒီများ၏ ထုံးစံအတိုင်း နှစ်နေရာတွင် စာလုံးပေါင်း မှားရေးထားတာ တွေ့ရပါသည်။ ပထမတနေရာမှာ ‘ရင်ရင် ကုန်ကုန်ပြောမယ်’ ဟူသောနေရာဖြစ်၍ ‘ရင်ရင်’ နေရာ ၌ ‘ယဉ်ယဉ်’ ဟု ပေါင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်မှာ ‘ရင်ရင်’ ဟူသည် လေဘာတီ မမြရင်ကိုဆိုလိုသော်လည်း ဗီစီဒီထဲ သီချင်းစာသား ရေးသူ ဗဟုသုတနုံ့နဲ့ခြင်းကြောင့်သော်လည်း ကောင်း သီချင်းအဓိပ္ပာယ်ကို သေချာကျနစွာမသိ၍သော်လည်းကောင်း ‘ရင်ရင်’ အစား ‘ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာခြင်း’ ဟူသောစကားလုံးမှ ‘ယဉ်’ ထင်ပြီး ‘ယဉ်ယဉ်’ ဟု ရေးလိုက်ဟန်တူပါသည်။ အမှန်မှာ တေးရေးသူ နန်းတော် ရှေ့ဆရာတင်က သီဆိုသူ မမြရင်၏အမည်ကို ထည့်သွင်းစပ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်၍ ‘ရင်ရင်’ ဖြစ်ပါသည်။ သီချင်းမှာလည်း လေဘာတီ မမြရင်တို့၏ရွာကလေးအကြောင်းနှင့် ရွာကို ပြန်ချင်သည့်အကြောင်း လွမ်းမော စဖွယ် စပ်ဆိုထားသောသီချင်း ဖြစ်ပါသည်။
နောက်တနေရာမှာ သီချင်း အဆုံးနားမှ ‘ခရာသံစုံ ကျူးကျော်ညံဟုန်’ ဟူသော နေရာ၌ ‘ခရာသံစုံ ကျူးကျော် ဉာဏ်ဟုန်’ ဟု ‘ညံ’ နေရာတွင် ‘ဉာဏ်’ ဟု မှားယွင်းရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမှန် ထိုစာသားမှာ မြဝတီ မင်းကြီးဦးစ ရေးသားသော ‘လေပြေဆော်သွင်းမြူး’ ယိုးဒယားမြင်းတက်မှ ဆရာတင် ယူငင်အသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်၍ အသံ ‘ညံ’ ခြင်းကိုဆိုလိုကြောင်း မသိသော စာသားရေးသူက ‘ညံ’ နေရာတွင် ‘ဉာဏ်’ ဟု ပြောင်းလဲ ရေးသားလိုက်ဟန် တူပါသည်။ အမှားနှစ်ခုစလုံးမှာ မှားသော်လည်း အသံထွက် တူနေသောကြောင့် အမှန်ကို နဂိုကတည်းက မသိသူပရိသတ်များ အတွက် အမှားကို အမှန်ထင်သွားဖွယ် ဖြစ်နေသည့်အပြင် အဓိပ္ပာယ်အရ လည်း လုံးလုံးလွဲနေသောကြောင့် အရုပ်ဆိုးသော အမှားများဟု ဆိုထိုက်ပါသည်။
ထိုအမှားနှစ်ခုအပြင် ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်မရှင်းလင်းသော စာသားနှစ်ခုကိုလည်း မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့ရပါတော့ သည်။ ပထမစာသားမှာ ‘ထမီလေး တိုတိုဝတ်ကာ မြငယ်စဉ်မှာ၊ လူထဲ မဝင်ခင်သေးတော့ ၊ အလှပြင်ဆင်ရှာ’ ဟူသော စာသား ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယစာသားမှာလည်း ပထမစာသားရှိရာ အပိုဒ်မှပင် ဖြစ်သောကြောင့် ဤနေရာတွင် စာဖတ်သူများ ရှင်းလင်းစွာသိမြင်နိုင်ရန် ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်မပေါက်သော စာသားအပြင် ရှေ့ဆက်လာမည့်စာသားများကိုပါ ကျွန်တော် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
‘ထမီလေး တိုတိုဝတ်ကာ မြ ငယ်စဉ်မှာ၊ လူထဲ မဝင်ခင်သေးတော့၊ အလှပြင်ဆင်ရှာ၊ ရင်ရင် ကုန်ကုန်ပြောမယ်၊ တောတသက်မို့ ဘယက် ဒွာဒရာ၊ ရွှံ့တွေ ကပ်စီကပ်စီ ပုတီးလုပ်ကာ သုံးတတ်ပါတယ် အုန်းမှုတ်ခွက်ကို ရှာရှာ၊ ဒေါ်လာပြားက ဆယ့်ငါးပြားလောက် ဆွဲတတ်တာ၊ ကိုကိုများက မြှောက်စားပေမယ့် ဟိုတုန်းကလောက် မပျော်ပါ’ ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် ကျွန်တော် အဓိပ္ပာယ်မပေါက်သည်မှာ ‘အလှပြင်ဆင်ရှာ’ ဟူသော စကားလုံး ဖြစ်ပါသည်။ ‘ရှာ’ ဟူသောစကားလုံးမှာ ကရုဏာသက်စဖွယ် အခြေအနေကို ဖော်ပြသောစကားလုံး ဖြစ်ပါသည်။ ‘အလှပြင်ဆင်ရှာ’ ဟူသောစကားလုံး၏ ရှေ့တွင် ‘လူထဲ မဝင်ခင်သေးတော့’ ဟု တေးရေးသူက ရေးထားပါ သည်။ ‘လူထဲ မဝင်ခင်သေးတော့’ ဟူသော စာသား၏အဓိပ္ပာယ်မှာ ‘ငယ်ရွယ်သေးသောကြောင့်၊ လူလား မမြောက်သေးသောကြောင့်’ ဟူသောအဓိပ္ပာယ် ဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ‘ငယ်ရွယ်သေးသော အချိန်တွင်၊ လူလားမမြောက်ခင်က’ ဟုလည်း အဓိပ္ပာယ်ပေါက်နိုင်ပါသည်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ထမီလေးတိုတိုနှင့် မမြရင် ကလေးကို နားဆင်သူတို့ မြင်ယောင်မိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် နောက်မှလိုက်လာသော စာသားဖြစ်သည့် ‘အလှပြင်ဆင်ရှာ’ နှင့်တွဲစပ်ကြည့်သောအခါ အဓိပ္ပာယ်မရှိ ဖြစ်သွားပါသည်။ စာသားအရ ငယ်သေးသော ကြောင့်၊ လူလားမမြောက်သေးသောကြောင့် အလှပြင်ဆင်ရှာသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ထွက်နေရာ ငယ်သေးသော ကြောင့် အလှပြင်ဆင်ရှာသည်ဟူသော စကား၏အလိုအရ ကြီးသောအခါ အလှပြင်ဆင်ရန်မလိုဟု အဓိပ္ပာယ် ထွက်နေသောကြောင့် အဓိပ္ပာယ်မရှိ ဖြစ်သွားရပါသည်။ ထိုစာသားကို ကျွန်တော် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ နားထောင်ကြည့်ပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မပေါက်ပါ။ ထို့အပြင် နောက်မှဆက်လိုက်လာသော စာသားများနှင့်ပါ ဆက်စပ်ကြည့်ပါသည်။ နောက်မှဆက်လိုက်လာသော စာသားများ၏အလိုအရ ‘တောတွင် ဖြစ်သောကြောင့် ဘယက်ဒွာဒရာအနေနှင့် (ရွှေများငွေများ အခြားအဆင်တန်ဆာများ မသုံးနိုင်ဘဲ) ရွှံ့တွေနှင့် ပုတီးလုပ်ကာ သုံးရပါသည်’ ဟု ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ချို့ချို့ငဲ့ငဲ့ အလှပြင်ဆင်ရသည့် သဘောအနေဖြင့် ‘အလှပြင်ဆင်ရှာ’ ဟု သုံးထားလေသလောဟု ဆက်စပ်စဉ်းစား ကြည့်ပါသည်။ သို့သော် စိတ်နှလုံး ဒုံးဒုံးချလောက်အောင် တိကျပြတ်သားသည့်အနက်ကိုကား ကျွန်တော် ရှာမရဖြစ်နေပါသည်။
နောက်ထပ် ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်မပေါက်သော စာသားမှာ ‘တောတသက်မို့ ဘယက် ဒွာဒရာ’ ဟူသော စာသား ဖြစ်ပါသည်။ စာသားတွင် ‘တောတသက်မို့’ ဟုဆိုထားရာမည်သို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမည် မသိ ဖြစ်နေပါသည်။ ‘တောတသက်မို့’ ဟူသည် ‘တောတွင် တသက်လုံးနေထိုင်ခဲ့သောကြောင့်’ ဟု ဆိုလိုသလား စဉ်းစားကြည့်ပါ သည်။ အမှန်စင်စစ် ထိုသို့ပဲ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလျှင်လည်း တေးရေးသူက တပိုင်းတစသာ ရေးထားသလိုဖြစ်နေပြီး နားထောင်သူက ဆက်စပ်အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုရသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပြန်ပါသည်။ ထိုစကားလုံးကိုလည်း ကျွန်တော်ဘဝင်မကျပါ။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် ပိုးအိစံသီဆိုထားသော ‘ရွှေပြည်စိုး’ ကို နားထောင်အပြီးတွင် မာမာအေးသီဆိုထားသော ‘ရွှေပြည်စိုး’ ကို ဆက်လက်နားထောင်ပါသည်။ မာမာအေးသီဆိုထားသောအပုဒ်တွင်မူ စာသား ရေးထိုးထား ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်မရှင်းလင်းသောအပိုဒ်ဖြစ်သည့် ‘လူထဲ မဝင်ခင်သေးတော့ အလှပြင်ဆင်ရှာ’ နှင့် ‘တောတသက်မို့ဘယက်ဒွာဒရာ’ ပါသည့်အပိုဒ်ကို ကျွန်တော် ထပ်ခါထပ်ခါ နားထောင်ရပါသည်။ ထိုသို့ နားထောင်ရာတွင် မာမာအေးလည်း ပိုးအိစံသီဆိုထားသော စာသားများအတိုင်းသာ သီဆိုထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ထိုအခါတွင် ကျွန်တော်မရှင်းလင်းသောစာသားများအတွက် အဖြေရှာရန် နည်းလမ်း မရှိတော့ပါ။ ရှေးမြန်မာ သီချင်းများအား ယခုခေတ် ပြန်ဆိုကြရာတွင် ထိုက်သင့်စွာ အလေးဂရုမပြုကြသောကြောင့် မှားယွင်းသီဆို မိခြင်းများ၊ စကားလုံးအကျအပေါက်များ အစရှိသည်တို့ကိုမူ ဆရာမောင်သာနိုး၏ဆောင်းပါးများမှတဆင့် ကျွန်တော် အတော်အတန် သိပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ယခု ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းစာသားများနှင့်ပတ်သက်၍မူ ကျွန်တော် ဘယ်မှာမှမဖတ်ဖူးသေးပါ။ မှားနေသည်ဆိုလျှင်လည်း မည်သို့မှားနေကြောင်းနှင့် မည်သည်က အမှန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကျွန်တော်တွေးဆ၍ မရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်မရှင်းလင်းသော ထိုစာသားနှစ်ပါဒ နှင့်ပတ်သက်၍ တအုံနွေးနွေးအဆင့်ဖြင့်သာ ကျွန်တော်ကျေနပ်ခဲ့ရပါသည်။
သို့သော် ကျွန်တော် ထိုသို့ ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းစာသားများကို စတင်သိရှိခွင့်ရပြီး ခြောက်လခန့်အကြာတွင်ပင် မိုးပေါ်ကကျလာသကဲ့သို့ မဇ္ဈိမဝက်ဆိုက်တွင် မန္တလေးမှ စာရေးဆရာ ဆူးငှက်၏ဆောင်းပါးတပုဒ် ပါလာပါ သည်။ ဆောင်းပါး၏အမည်မှာ ‘တယောလိုလို အတောလိုလို’ ဖြစ်ပြီး ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းစာသားအကြောင်း ပြည့်စုံကျနစွာတင်ပြထားသောဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်မှာ ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲကျသကဲ့သို့ ဖြစ်သွားပြီး ဆောင်းပါးအား သေချာဖတ်ရှုပါသည်။ ထိုအခါမှ ကျွန်တော် ဒွိဟဖြစ်နေခဲ့သောစာသားများ၏ အမှန်စာသားကို ကျွန်တော်သိရှိရပြီး ကျွန်တော့်သံသယများမှာ ရှင်းရှင်းကြီး အလိမ်ပြေသွားပါတော့သည်။
ဤနေရာတွင် ထိုဆောင်းပါးမှလိုအပ်သောအပိုင်းကို အနှစ်ချုပ်၍ တင်ပြပေးပါမည်။ ဆောင်းပါးမှာ ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းအကြောင်းရေးသားထားသောဆောင်းပါးဖြစ်၍ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ဆရာဆူးငှက်လူထုကြီးပွားရေး စာအုပ်တိုက်၏ အယ်ဒီတာစားပွဲသို့ ရောက်သွားပါကြောင်း၊ ထိုအချိန်တွင် လူထုဒေါ်အမာ၏ နာမည်ကျော် ‘ပြည်သူချစ်သော အနုပညာသည်များ’ ကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်စီစဉ်နေသောအချိန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုအခါ လူထုဒေါ်အမာက စာအုပ်ပြန်ထုတ်မည်ဆိုလျှင် ပြင်စရာဖြည့်စွက်စရာများ ရှိပါကြောင်းနှင့် ‘ပြည်သူချစ်သော အနုပညာသည်များ’ ကို ယခင်ထုတ်ဝေခဲ့စဉ်က စာဖတ်ပရိသတ် အရွယ်သုံးပါး ကျားမ မရွေး ဆရာတော် သံဃာတော်များထံမှ ပါမကျန် လူထုတိုက်သို့ ပေးစာများလက်ခံရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ ထိုစာများကို စနစ်တကျ သံသေတ္တာထဲတွင် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ထိုစာများကိုပြန်လည်ဖတ်ရှု၍ မှတ်စု ထုတ်ထားစေလိုကြောင်း ဆရာဆူးငှက်ကိုပြောခဲ့ပါသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုအခါ သံသေတ္တာထဲရှိ စာများထဲမှလွန်ခဲ့သော (၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ နောက်ပြန်ရေတွက်လျှင်) နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော်က ရေးသားထားခဲ့ သော ဝါကျင့်ကျင့် စာရွက်ကလေးတရွက်ကို ဆရာဆူးငှက် တွေ့ရပါတော့သည်။ စာရွက်ကလေးမှာ ‘ပြည်သူချစ်သော အနုပညာသည်များ’ ကို ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေစဉ်က ဦးပဉ္စင်းငယ်လေးတပါး လူထုတိုက်သို့ ရေးလိုက်သောစာနှင့်အတူ ပူးတွဲပါရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဦးပဉ္စင်းကလေး၏စာအရ သူငယ်စဉ်က သူနေထိုင်သော ရွာသို့ လေဘာတီမမြရင် လာရောက်ဖျော်ဖြေရာတွင် ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းကို ကြိုက်လွန်းသောကြောင့် လေဘာတီမမြရင်ထံမှ စာသားမေးကာ ကိုယ်တိုင်ကူးရေးလိုက်ပြီး ထိုကူးရေးလိုက်သော စာရွက်ကလေးကို ပူးတွဲပေးပို့လိုက်ပါကြောင်း ရေးသားထားပါသည်။ စာရွက်ကလေးတွင်ပါသောစာသားမှာ မူရင်းသီဆိုသူ လေဘာတီမမြရင်ကိုယ်တိုင် ချပေးသောစာသားများဖြစ်သောကြောင့် ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းစာသားနှင့် ပတ်သက် ၍ အလွန်ခိုင်မာသောအထောက်အထား ဖြစ်ပါသည်။ စာရွက်ကလေးမှာ ပျက်စီးလုမတတ်ရှိနေပြီဖြစ်၍ ဖတ်၍ ရတုန်းအချိန်တွင် စာရွက်တွင်ပါသော သီချင်းစာသားများကို ဆရာဆူးငှက် ကူးယူလိုက်ပါသည်။ ထိုစာသားများကိုဖတ်ရှုရသောအခါတွင်မှ ကျွန်တော်ဒွိဟဖြစ်ခဲ့သော စာသားများ၏စာသားအမှန်ကို ကျွန်တော် သိရှိရပါတော့သည်။
ပထမဦးစွာ ‘လူထဲ မဝင်ခင်သေးတော့ အလှပြင်ဆင်ရှာ’ ဟူသော စာသားနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြပါမည်။ ထိုစာသားမှာ မှားနေပြီး ဦးပဉ္စင်းလေး ရေးကူးထားသောစာသားအရ စာသားအမှန်မှာ ‘လူထဲ မဝင်ခင် သေးတော့ အလှပြင်ဆင်ချာ’ ဖြစ်နေကြောင်း ကျွန်တော်တွေ့ရပါတော့သည်။ အတိအကျဆိုရလျှင်မူ ‘အလှပြင်ဆင်ချာ’ မဟုတ်ဘဲ ‘အလှအပြင်အဆင် ချာ’ ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်နားလည်မိပါသည်။ ငယ်ရွယ်သေးသောကြောင့်၊ လူလားမမြောက်သေးသောကြောင့် ရေရေလည်လည် အလှမပြင်တတ်သေးဘဲ အလှအပြင်အဆင်ညံ့ဖျင်းသေးသည့်သဘောကို ‘အလှ အပြင်အဆင် ချာ’ ဟု ဆရာတင်က ရေးဖွဲ့လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ‘ရှာ’ မဟုတ်ဘဲ ‘ချာ’ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုစဉ်က သီချင်းစာသားများကို အတိအကျ မှတ်တမ်း တင်မထားခဲ့ရာ နောက်ပိုင်းသီဆိုသူများက ယခင်သီဆိုခဲ့သော မမြရင်၏အသံကို ဝိုးတိုးဝါးတား နားထောင်ပြီး အသုံးနည်းသော ‘ချာ’ အစား အသုံးများသော ‘ရှာ’ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆကာ မှားယွင်းသီဆိုကြခြင်း ဖြစ် ကြောင်း ကျွန်တော်တဆက်တည်း သဘောပေါက်လိုက်မိပါသည်။
ဒုတိယအနေဖြင့် ကျွန်တော်ဒွိဟဖြစ်နေသော ‘တောတသက်မို့ ဘယက်ဒွာဒရာ’ ဟူသောစာသား၏ စာသားအမှန် ကို ကျွန်တော်တင်ပြပါမည်။ ဦးပဉ္စင်းလေး၏ရေးမှတ်ထားချက် အရ ‘တောတသက်မို့ ဘယက်ဒွာဒရာ’ မဟုတ်ဘဲ ‘တောသက်သက်မို့ ဘယက်ဒွာဒရာ’ ဖြစ်ပါသည်။ ‘သက်သက်’ ဟူသော စကားလုံး၏အဓိပ္ပာယ်မှာ အထူးရှင်းနေစရာမလိုဘဲ ‘လုံးလုံးလျားလျား’ ဟု အနက်ထွက်လေရာ တောလုံးလုံး ဖြစ်နေသောကြောင့်၊ တောသက်သက်ဖြစ်သောကြောင့် ဘယက်ဒွာဒရာအနေဖြင့် အခြား အဆင်တန်ဆာများ ကိုမဝတ်ဆင်နိုင်ဘဲ ရွှံ့ဖြင့်ပုတီးလုပ်ကာ သုံးစွဲရပါသည်ဟု ဆရာတင်ရေးဖွဲ့ထားသော အနက်အဓိပ္ပာယ်မှန်ကို ထိုအခါမှ ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ နားလည်သဘောပေါက်မိပါတော့သည်။ အမှန်စင်စစ် ‘တောတသက်မို့’ နှင့် ‘တောသက်သက်မို့’ မှာ အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားသော်လည်း မမြရင်သီဆိုသည်ကို နားထောင်ပြီး စာသားကို လိုက်ရေးရသူ၊ လိုက်ဆိုရသူများက ‘တောသက်သက်မို့’ ဟု မမြရင် သီဆိုထားသည်ကို လွယ်လင့် တကူ ‘တောတသက်မို့’ ဟုယူဆပြီး မှားယွင်းကောက်ယူ သီဆိုမိသည်အထိ ဖြစ်သွားကြခြင်း ဖြစ်ပါတော့သည်။
ထိုသို့ ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်း၏စာသားအပြည့်အစုံ အတိအကျကို ကျွန်တော်သိရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ထိုအချိန် အထိ ထိုစာသားအမှန်အတိုင်းသီဆိုထားသော ‘ရွှေပြည်စိုး’ ကိုကား ကျွန်တော်နားမထောင်ခဲ့ ရပါ။ ထိုသို့ အနေအထားဖြင့် သုံးနှစ်ခန့်ကြာပြီးနောက် လွန်ခဲ့သောအပတ်ကမှ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ကျွန်တော် ယခင်က တခါမှသွားရောက်မကြည့်မိခဲ့သော ဝက်ဆိုက်တခုသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ ထိုဝက်ဆိုက်မှာ www.soundcloud.com ဖြစ်၍ ထိုဝက်ဆိုက်တွင် မြန်မာသီချင်းများတင်ထားကြောင်း ကျွန်တော် သိရှိနေပါ သည်။ ထိုအခါမှ ကျွန်တော် ထိုဝက်ဆိုက်၏သီချင်းရှာရန်နေရာတွင် ‘ရွှေပြည်စိုး’ ဟု ဖြည့်စွက်ပြီး ရှာဖွေမိပါ သည်။ ထိုအခါမှ လေဘာတီမမြရင် ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားသော ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းအား ကျွန်တော် နားထောင် ရပါတော့သည်။
ထိုသို့နားထောင်သော်လည်း လေဘာတီမမြရင်သီဆိုထားသည်မှာ ကျွန်တော်သိနေပြီဖြစ်သော အမှန်စာသား များဖြင့် ဟုတ်မဟုတ် ကျွန်တော်နားထောင်ရုံဖြင့် ခွဲခြားရန်မတတ်နိုင်ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုသီချင်းကို ကျွန်တော့် ကွန်ပြူတာထဲသို့ကူးယူရန် ကျွန်တော်ကြိုးစားသော်လည်း ကူးယူ၍မရ ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကံအားလျော်စွာ အခြားဝက်ဆိုက်တခုမှ ထိုသီချင်းကိုပင် ဗီဒီယိုဖိုင်အနေဖြင့် ကျွန်တော် ထပ်တွေ့ပါတော့သည်။ ထို ဗီဒီယိုဖိုင်မှာ လေဘာတီမမြရင်၏ နှစ်တစ်ရာပြည့် (၂၀၀၄ တွင်ပြည့်သည်) အတွက် ဂုဏ်ပြုထားသော ဗီဒီယို ဖိုင်ဖြစ်၍ မမြရင်သီဆိုသော ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းနှင့်တကွ မမြရင်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်းကိုပါ မမြရင်၏ ဓာတ်ပုံကလေးများဖြင့် ဖော်ပြထားသော ဗီဒီယိုဖိုင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမူ ကွန်ပြူတာထဲသို့ အလွယ် တကူ ကူးယူ၍ ရသောကြောင့် ကျွန်တော် ကူးယူလိုက်ပြီး ပြန်လည် ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါသည်။
ပထမတခါ နားထောင်ကြည့်ပါသည်။ ကျွန်တော် နားမရှင်းပါ။ ထိုအခါမှ သီချင်းကို slow လုပ်၍ နားထောင် ကြည့်ရန် ကျွန်တော်သတိရပြီး ပထမဦးစွာ သီချင်းမြန်နှုန်းကို နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပြီး 0.8 တွင် ထား၍ နားထောင်ကြည့်ပါသည်။ သိပ် မရှင်းသေးပါ။ ထိုအခါ 0.6 အထိလျှော့ချ၍ ထပ်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါသည်။
ဤအခါတွင်မူ ကျွန်တော် မလွဲတော့ပါ။ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကျွန်တော် ကြည့်ရှုနေသော Gom player မှတဆင့် ကျွန်တော် နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်တိုင်တိုင် စောင့်စားခဲ့ရသည့် မမြရင်၏ အသံကလေးသည် မျှော်လင့်ကြီးစွာ စောင့်ဆိုင်းနေသော ကျွန်တော့် နားစည်ထဲသို့ တိုးဝင်လာပါသည်။
‘မြ နဲ့ မောင် နဲ့ ခုမှတွေ့တာ’ တဲ့ …
‘လူထဲ မဝင်ခင်သေးတော့ အလှ အပြင်အဆင် ချာ’ တဲ့ ….
‘ရင်ရင် ကုန်ကုန်ပြောမယ် တောသက်သက်မို့ ဘယက်ဒွာဒရာ’ တဲ့ ….
မမြရင်၏ ‘ချာ’ ဟူသော အသံကလေး ကိုလည်းကောင်း၊ ‘သက်သက်’ ဟူသောအသံကလေးကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်ပီသရှင်းလင်းစွာ ကြားလိုက်ရပါသည်။
ပြည့်စုံအောင် ထပ်မံဖြည့်စွက်ရလျှင် ‘အုန်းမှုတ်ခွက် ကို ရှာရှာ’ မဟုတ်ဘဲ ‘အုန်းမှုတ်ပဲ့ ကို ရှာရှာ’ သာ ဖြစ်ပါ သည်။ ‘အုန်းမှုတ်ခွက်’ မဟုတ် ‘အုန်းမှုတ်ပဲ့’ ဖြစ်ရာ ထို စကားလုံး နှစ်လုံးမှာလည်း အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားလှပါသည်။
ကျွန်တော်ကြည်ညိုလေးစားရပါသော နန်းရှေ့တင်ဟု ‘ရွှေပြည်စိုး’ သီချင်းကလေးထဲတွင် သူ့နာမည်သူ ထည့် သွင်းစပ်ဆိုခဲ့သည့် နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင် တယောက်တော့ တမလွန်မှ ဝမ်းမြောက်နေလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်မိပါသည် ။ ။
ဆူးငှက် ၏ ဆောင်းပါး ဖတ်ရှုရန် ။ ။ https://www.facebook.com/SueHnget/posts/723248751019748:0
လေဘာတီမမြရင်သီဆိုထားသော ‘ရွှေပြည်စိုး’ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ရှုနားဆင်ရန် ။ ။
http://nwaymoresaung.blogspot.com/2012/11/blog-post_10.htmlအသံသီးသန့် နားဆင်ရန် ။ ။ https://soundcloud.com/la-yake-cho/sets/x6gm29yzidkd
ညိုထက်ညို – နံနက် ငါးနာရီ (0)
One Response to ညိုထက်ညိ – ‘ရွှေပြည်စိုး’ ရှာပုံတော်
Catwoman on September 26, 2016 at 8:41 am
You have too much free time on your hand